Ampidiro Android 1.6 na Donut Ofisialy amin'ny htc G1 tsy misy faka | Androidsis
antocara | | android-root, HTC, Tutorials, Android Version
T-Mobile nanomboka nanomboka tamin'ny alàlan'ny OTA ny Fanavaozana Android 1.6 na Donut mankany amin'ny terminal-n'izy ireo HTC G1 any Etazonia Raha manana terminal ianao amin'ity orinasa ity nefa tsy miorim-paka sy miaraka amin'ilay kinova voalohany mofomamy kelyTsy mila miandry ianao vao tonga ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA, azonao atao ny mametraka azy io amin'ny tanana. Ireto ny dingana manaraka:
Mila misintona an'ity rakitra ity izahay.
Adikao ny fisie teo aloha ao amin'ny faka-karatry ny karatra SD ary omeo anarana hoe update.zip.
Atsangano indray ny telefaona amin'ny fomba fanarenana amin'ny alàlan'ny fanindriana HOME + Power.
Rehefa mahita teboka miantsoantso ao anaty telolafy iray miseho eo amin'ny efijery ianao dia tsindrio miaraka amin'izay koa ny bokotra Alt + L ary haseho anao ny efijery misy andiana safidy.
Tsindrio Alt + S ary hanomboka ny fanavaozana ny terminal.
Raha vantany vao vita io dia hiverina indray na raha tsy averinao ny tenanao.
Raha vao manomboka indray dia mandeha amin'ny Menu - Fikirana - Momba ny telefaona ary amin'ny faran'ny safidy rehetra dia ho hitantsika DRC83 izay ny Fanavaozana ny donat.
Aza adino fa ity fomba ity dia ampiasaina hanavaozana ny T-Mobile G1 any Etazonia izay tsy manam-paka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » INSTALL ANDROID 1.6 DONUT OFFICIAL ON HTC G1 TSY MISY faka
Omaly fotsiny dia nahazo ny fanavaozana tamin'ny alàlan'ny OTA aho, na dia nisokatra sy tsy tany Etazonia xD aza aho
Hispalis Bigger dia hoy izy:
Misy manana hevitra ve raha ho tonga amin'ny mazika Espaniola ny vodafone?
Valin'ny Bigger avy amin'i Hispalis
Nanaraka ny dingana rehetra aho hametrahana ny fanavaozana vaovao amin'ny mazia vodafone espaniola.
Ny zava-drehetra dia mety mandra-pahatongako mankany amin'ny maody fanarenana ary miteny amiko izy hoe:
E: Tsy afaka manokatra / cache / fanarenana / baiko
Omeko an'i Alt + SY ABORT NY INSTALLATION.
Afaka manampy ahy amin'ity olana ity ve ianao ???
Ho an'i Carlos:
Heveriko fa rehefa manondro ny Alt + S izy ireo dia midika hoe fitendry fisikinan'ny G1. Izany angamba no antony tsy mety aminao.
Na izany na tsy izany dia tsy manoro hevitra anao aho hametraka azy amin'ny majikao, satria izy ireo dia nanao ho an'ny G1, izay manana ny antsasaky ny Rom an'ny Magic.
misaotra kokoa !!
na izany aza lazaiko aminao fa tsy mila fitendry ianao.
Tsindrio fotsiny ny Start + HOME indray ary hiseho ireo baiko miaraka amin'ny fanafohezana azy ao anaty fononteny (oh: ny fametrahana ny fanavaozana alt + s)
Misaotra ihany noho ny fanazavanao.
Manantena izahay fa tsy ho ela dia afaka mampihatra an'ity kinova vaovao ity amin'ny majika isika satria ny marina dia toa nihatsara io !!
Ah tsara ry Carlos !!! Fantatrao ho anao izany, tsy fantatro. Misaotra nizara ny zavatra hita.
Na izany na tsy izany, novakiako fa ny G1 Donut dia tsy manana programa tsy maintsy sintomin'ny tompony eny an-tsena.
Vakio ihany koa fa ny T-Mobile UK (Fanjakana Mitambatra) dia hanomboka hizara ny Donut ho an'ny G1 sy ny G2 amin'ny 12 Oktobra. Mbola vitsy ny sisa tavela amin'ny majika ataontsika, na farafaharatsiny mba antenaiko.
hugox dia hoy izy:
Tao anaty vdd dia namoy fo aho, nametraka ny fanavaozana aho satria tonga irery tamin'ny findaiko, saingy nanomboka nanao hadisoana madio ho an'ny zava-drehetra ho an'ny mozika, ho an'ny fandriana, rehefa nahazo msg aho, ny fifandraisana wifii ho an'ny zava-drehetra dia tsy nisy nilana azy ilay cel ary naveriko tamin'ny factory ilay izy ary izao te-hiditra avy amin'ny kaonty gmail-nao aho ary tsy avelany hiteny amiko hoe tsy manohana data na olana vetivety ilay puce ... amin'ny vdd ary efa tena kivy aho, io tsy avelako hiditra amin'ny telefaona ... ampio aho ... ny mailaka ataoko dia ...
Valiny ho an'i Hugox
Hita fa nahazo ny kinovan'ny OTA aho fa tsy nametraka izany tamin'ny findaiko, raha tapitra ilay fisintomana rehefa vita ilay fampidinana dia hametraka verification ary miverina amin'ny 0 miaraka amin'ny safidy hisintomana azy indray sns. fa maninona no izao?
Izaho koa dia nanandrana nametraka azy io tamin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana eto ary manala ny fandidiana. Tsy mametraka sonia ahy (rakitra 302) ary etsy ambany dia tsy mahomby ny fanamarinana ahy.
al3x dia hoy izy:
Salama, manana olana mitovy amin'i Carlos aho, ny findaiko dia HTC T-Mobile G1… rehefa vonoiko amin'ny fomba fanarenana izany dia manome ahy ny lesoka Tsy afaka misokatra / cache / sitrana / baiko ary rehefa alefako ny manavao azy manome ahy lesoka: Abor amin'ny andalana2… inona no azoko atao ??? Nanaraka ny dingana nataon'ny lahatsoratra hafa aho hametrahana fampiharana ao amin'ny SD ary naidiko ho 1.0 ilay izy, saingy tsy mandeha amiko ny telnet ary ankehitriny dia te hiverina amin'ilay kinova 1.6 izay efa nataoko teo aloha aho. AOKA IANAO NY FANAMPIANA maika anao….
Valio ny al3x
Yael dia hoy izy:
Manana ny nofinofiko HTC voahidy amin'ny Android 1.0 aho. Ahoana no ahafahako manatsara ny 1.6? Tsy telefaona dev izany fa tsy mandeha ny fanaovana azy araka ny voalazanao tamin'ity lahatsoratra ity.
Valio i Yael
tw dia hoy izy:
Manana g1 aho fa tsy tonga ny fanavaozana ny donut, ahoana no ahatongavako azy?
Mamaly an'i tw
brayhanrd dia hoy izy:
Miarahaba. Mila fanampiana aho. Ataoko ireo dingana milaza amiko hanavao ny G1 nataoko fa nametraka azy 1.0 fa te hiverina any amin'ny cupcake 1.5 aho dia manao ny dingana rehetra saingy milaza amiko izany fa tsy mahita ny fanavaozana ao amin'ny SD-ko. Inona no tsy mety ataoko? Vonjeo
Mamaly an'i brayhanrd
Tavo VR dia hoy izy:
Misy olona manana an'ity rakitra ity hampakatra azy azafady! Te hiverina amin'ny 1.5 na 1.6 aho 🙂
Valio amin'i Tavo VR
Cezar A Arrieta L dia hoy izy:
Tsy afaka manomboka amin'ny 1.0 ka hatramin'ny 1.6 mivantana ianao, tsy maintsy mankany amin'ny 1.5 aloha, hita ao amin'ny pejin'ny mpamorona ny kaody google ny fisintomana
Valio amin'i Cezar A Arrieta L
william alvarez dia hoy izy:
Ahoana no ahazoako 1.5 ary hampiakatra ho 1.6? ampio azafady
Mamaly an'i william alvarez
Didy fototra miaraka amin'ny ADB AVY AMIN'NY ANDROID SDK